Wararka - Muxuu shaashadda ugu fiican u jeedinayaa marka taleefanka gacantu miiska saaran yahay? Maaha kaliya arrimaha gaarka ah
Muxuu shaashadda ugufiicnaanayaa xagga hoose marka taleefanka gacantu miiska saaran yahay? Maaha kaliya arrimaha gaarka ah
Aan ku weydiiyee horta su’aal
Moobilka badanaa waxaa la saaraa miiska marka uusan isticmaalin,
Ma dhigaysaa shaashadda korkeeda ama shaashadda hoos?
Laakiin waad ogtahay waxa?
Telefoonka gacanta dusha saar miiska dusha shaashadda.
Waad ogaan doontaa sababta ka dib markaad aqriso waxyaabaha soo socda?
Saddex faa iidooyin shaashadda hoos u jeeda
Ka hortag boodhka, shaashadda taabashada dareeraha
1. Haddii shaashadda kor loo dhigo, waxaa jiri doona boodh badan, oo ka dhigaya shaashadda wasakh. Shaashadda taleefanka gacanta iyo filimka adag ayaa la xoqin karaa inta lagu jiro nadiifinta.
2. Shaashadda taleefanka gacanta waji kor u qaad, biyo, maraq cabitaan, iwm si shil ah ugu faafay shaashadda taleefanka gacanta, taas oo loo yaqaanno wadnaha oo daloola.
Sidaa darteed, marka taleefanka gacanta aan la isticmaalin, shaashadda ayaa hoos u socota, taas oo ka fogaan karta xoogaa waxyeelo deegaanka ah iyo mid bini-aadam oo illaa xad gaadha.
Kahortag kamaradaha la kiciyey in la xoqo
Marka hore la dhigo shaashadda taleefanka gacanta, kaamirada loo yaqaan 'convex camera' ayaa ku xigta desktop-ka, taas oo ay fududahay in la xoqo oo la xoqo kaameradda, taas oo saameyn ku yeelan doonta tayada sawirka.
Ilaalinta arimaha gaarka ah
Telefoonka gacanta waji kor baa loo dhigaa. Haddii qof ay dhacdo inuu kugu ag joogo, taleefanka ama farriinta waxaa arki kara dadka kale. Haddii warkaasi yahay mid aad u gaar ah, waa wax laga xishoodo. Xogta ka sokow, haddii Alipay iyo bangiga APP aysan xirnayn, waxaa laga yaabaa inay soo shaac baxaan sababtoo ah meeleynta saxda ah ee shaashadda.
Dabcan, marka taleefanka aan la isticmaalin,
Iyada oo shaashadda hoos loo dhigo, waxyaabo badan ayaa ka sii badan
Nooc ka mid ah
Tusaale ahaan, ma jiro farriin deg deg ah oo shaashadda taleefanka gacanta,
Waxaan xoogga saari karaa waxbarashadayda iyo shaqadayda.
Intaas waxaa sii dheer, haddii jeebka taleefanka gacanta si aad ugu fiirsato: waxaa lagugula talinayaa in shaashadda la dhigo meel u dhow lugta, taas oo ka hortagi karta taabashada biraha dibedda iyo geeska miiska, waxayna si wax ku ool ah uga fogaan kartaa suurtagalnimada in lugta gubto ee kululaynta baytariga xagaaga.
Akhrinta kadib, ma fahantay?
Sidee u dhigtaa taleefankaaga gacanta?
Waqtiga boostada: Aug-18-2020